दिनेश बस्नेत आइतवार, माघ १६, २०७३ 1668 पटक पढिएको
नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त क्याप्टेन रणध्वज गाउँमा बस्थे । सहरको घरमा उनका जेठो छोराको परिवार बस्थे । आफ्नो तीसवर्षे जागिरे जीवनमा उनले नेपालका विभिन्न सहरहरू घुमेका थिए । अवकाशपछि भने उनले गाउँले जीवन रोजे ।हरेक दिन बिहान उनी कसरत गर्थे । त्यसैले उनको ज्यान हृष्टपुष्ट र स्वस्थ्य थियो । बूढा भइकन पनि फुर्तिला थिए उनी ।
क्याप्टेन रणध्वजले पशुपन्छीलाई निकै माया गर्थे । घरमा हाँस, कुखुरा, परेवा र कुकुर थिए । तिनीहरूको हेरचाह क्याप्टेन आफैंले गर्थे । कति बेला तिनलाई पानी र आहार दिनुपर्छ ख्याल राख्थे उनी ।
तीनवटा कुखुरा पोथी थिए । एक दिन कालो पाथी ओथारो बस्यो । कुखुराका संख्या बढ्ने भएर उनी निकै खुसी थिए । अक्सर उनी कालो पोथी ओथारा बसेको ठाउँमा गई राख्थे । उसलाई चाहिने जति पानी र आहारा उनले त्यही नै लगिदिन्थे ।
कुखुराको खोरमा स्याउस्याउ सुलसुले थिए । जसमध्ये केही सुलसुले क्याप्टेनलाई सरे । ती शरीरको जताततै छाए । उनलाई शरीरमा केही चिज रगरग हिँडेको आभास भयो ।
'हेर त बूढी के हिँडेको छ, मेरो पिठ्यूँमा ?' क्याप्टेनले बूढीलाई भने ।
बूढीले राम्ररी नियालिन् तर केही देखिनन् र भनिन् 'केही पनि छैन ।'
'हेर न हेर, कस्तरी रगरग हिँडेको छ' क्याप्टेनले भने ।
बूढीले झन् राम्ररी हेरिन् । फेरि उनले दोहोर्‍याएर भनिन्, 'केही छैन क्या, बरु चिलाएको भए कन्याइदिन्छु नि त ।'
'हत्तेरिका चिलाएको हैन के, रगरग छालामा हिँडेको छ ' क्याप्टेनले अलिकता झर्केर भन्ने, 'त्यही पनि पिठ्युँमा कन्याइदेऊ त ।'
बूढीले पिठ्यूँको माथिल्लो भागमा कन्याउन थालिन् । 'अलि तल तल', क्याप्टेनले ढाड बंग्याउँदै भने ।
उनी फेरि तल कन्याउन थालिन् । 'अलि माथि, अलि माथि' क्याप्टेनले धीत नपरे जसरी भने ।
'गर्धनमा पनि सगसग गर्‍यो फेरि' उनले भने, 'कन्याएर कति भएन ।'
'कन्याएको लागेको छैन भने किन कन्याउनु त नि काम नपाए जसरी', बूढीले हाँस्दै भनिन् ।
'हाँस हाँस । अझ मज्जाले हाँस । मलाई जस्तो आफूलाई यस्तो भए पो चाल पाउँथ्यौ', क्याप्टेनले रिसाउँदै भने ।
क्याप्टेन रातभरि निदाउन सकेनन् । जति बेला पनि उनका शरीरमा छाएका सुलसुले धावक झैं दौडन्थे । त्यतिबेला उनलाई सगसगाउथ्यो, खपिनसक्नु हुन्थ्यो । के गरुँ कसो गरुँ हुन्थ्यो, घरि एकातिर सगसग गथ्र्यो, घरि अर्कोतिर सगसग गथ्र्यो । बिचरा ! क्याप्टेन बूढा आजित पर्थे ।
बिहानै बूढीले चिया टक्र्याइन् । 'तँ त सुतिस् बूढी म त रातभरि निदाइनँ । के दशा आइलाग्यो के दशा' क्याप्टेनले भने ।
'तपाईंलाई नसासम्बन्धी रोग लागेजस्तो छ, उहीँबेला पल्टनमा गरेको दुःख निस्केको होला । अस्पताल गएर जँचाउनु होस् । ढिला नगर्नोस खाना खाएर गइहाल्नोस्', उनले सम्झाइन् ।
क्याप्टेनलाई बूढीको सल्लाह उचित लाग्यो । अस्पतालमा उनले सम्पूर्ण शरीरको जाँच गरे । डाक्टरले भनेअनुसार रगत र पिसाब पनि जचाएँ । एक्सरे गरे । तर निरोगी क्याप्टेनको कुनै रोग देखिएन ।
'होइन डाक्टर सा'ब तपाईं केही रोग छैन भन्नुहुन्छ । म त खपिनसक्नु भएर आएको हुँ । सम्पूर्ण शरीर सगसग गर्छ । घरि पिठ्यूँतिर, घरि पेट तिर, घरि गर्दन तिर । कता कता हो, कताकता चिटचिट टोके जस्तो पनि हुन्छ । बरु म भर्ना गरेर अस्पतालमै बस्छु', क्याप्टेनले रुन्चे स्वरमा भने ।
अस्पतालको मुख्य डाक्टरले भन्यो, 'हामीले तपाईंको स्वास्थ्यमा केही गडबडी र खराबी देखेनौं । तैपनि एकदुई दिन यहीँ भर्ना भएर बस्नोस् हामी थप परीक्षण गर्छौं ।'
क्याप्टेन तीन दिनसम्म अस्पतालमा बसेँ । उनको स्वास्थ्यको थप परीक्षण हुँदै गयो । आफन्तहरू फलफूल र जुस लिएर भेट्न आए । निकै सान्त्वना र सहानुभूति प्रकट गरे । तर डाक्टरले कुनै रोग ठम्याउन सकेन । भन्नाले रोग नै पत्ता लागेन ।
यसरी अस्पतालमा बस्दा शरीरमा भएका सुलसुले घट्दै गए । क्याप्टेनलाई केही राहत महसुस आहारा र पानी हाल्न खोरमा गए । फेरि सुलसुले उनको शरीरमा सरे । पहिले जसरी सुलसुलेले सताउन थाले । क्याप्टेन असाध्यै चिन्तित भए । उनका आँखाबाट बर्रबर्ती आँसु झरे ।
हजुरबाको आँखामा आँसु देखेर छेउमा बसेकी नातिनीले सोधी, 'के भयो हजुरबा सञ्चो नभएर रुनु भएको हो ? '
क्याप्टेन केही बोलेनन् । 'भन्नोस् न हजुरबा के भयो ? ' नातिनीले कर गर्दै फेरि सोधिन् ।
'अँ नानी कत्ति सञ्चो भएन । अब म मर्छु कि क्या हो ? ', क्याप्टेनले निन्याउरो मुखले भने ।
'के हुन्छ, हजुरबा तपाईंलाई ?' नातिनीले जिज्ञासा राखिन् ।
क्याप्टेन भित्तामा पिठ्यूँ दलिरहेका थिए । नातिनीले अनुमान गरिन्, 'शरीर चिलाउँछ हो, हजुरबा ? '
'अँ नानी', उनले भित्तामा दलिँदै भने ।
'खोइ, म कन्याइदिन्छु', नातिनीले माया मान्दै भनिन् ।
क्याप्टेनले कमिज खोले । भेस्ट पनि खोले र नातिनीलाई कन्याइदिन भने । नातिनीले कन्याइदिन लाग्दा उनका तिखा आँखाले पिठ्यूँमा सुलसुले हिँडेको देखिन् । अनि आत्तिएर नातिनीले भनिन्, 'हजुर-बा, तपाईंको पिठ्यूँमा त सुलसुले परेका रहेछन् ।'
'के भन्छे यो', क्याप्टेनले चर्को स्वरमा भने, 'ओई बुढी नातिनीले के भन्छे ? हेर त । सुलसुले छन् अरे, पिठ्यूँमा ।'
क्याप्टेनकी पत्नी बाहिर आइन् । अनि चस्मा लगाएर नियालिन्, 'हो त, सुलसुले रहेछन् । तिनैले तपाईंलाई यति विधि सताएका रहेछन् ।'
'धत् बेकारमा अस्पतालमा गइएछ । डाक्टरको योग्यतालाई दोष दिइएछ । आँखिरमा सुलसुले पो रहेछन् । मेरी नातिनीले पत्ता लगाइन्, मलाई के भएको रहेछ' क्याप्टेनले नातिनीलाई प्रेमपूर्वक अगाल्र्दै भने ।
त्यसपछि तातोपानीले मिचिमिची नुहाए । तातोपानीले शरीरमा भएका सुलसुले पखाल्यो । अनि लगाइरहेका लुगा नलगाई उनले अर्को कपडा फेरे । त्यसपछि उनको शरीरमा सुलसुले रहेनन् । तब उनले स्वस्थ अनुभव गरे ।
राम राज्यको प्रतीक तिहार 1899
घरघरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिँदै 5281
सी जिनपिङका पाँच वर्ष: व्‍यक्तिगत अधिकार बढ्‍यो, देशको लागि खतरा 21337
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी 3532
नेवार समुदायको मौलिक पर्व म्हःपूजा 2014
भारतीय सीमा सुरक्षाबलद्वारा खेत जोत्नमा रोक 20844